ऋण लिएका श्रीमान साउदीमा, अदालतको आदेशमा डोजर लगाए टहरोमा
२७ साउन, काठमाडौँ । विदेश पठाउँदा दिएको ऋण नतिरेको भन्दै महोत्तरीमा एक एजेन्टले गरिब परिवारको घर डोजर लगाएर भत्काइदिएका छन् ।
सम्पत्तिको नाममा पाँच धुर जग्गामा बनेको फुसको टहरो पनि भत्किएपछि परिवारको वास सडकमा भएको छ ।
महोत्तरी भंगहा नगरपालिका –१ कविलासका मोहम्मद शेषको घर अदालतको आदेशमा शनिबार भत्काइएको हो । शेषलाई पैसा दिने स्थानीय एजेन्ट बद्री ठाकुरको पक्षमा फैसला दिएको अदालतका अधिकारीहरु आदेश कार्यान्वयन गराउन गाउँमै आएका थिए ।
अदालतका ६ जना अधिकारीलाई सुरक्षा दिन प्रहरी पनि खटिएको थियो । अदालतका हाकिमहरु, प्रहरी र ऋण दिने साहुका अगाडि शेषकी श्रीमती खातुनले हारगुहार गरेकी थिइन् । तर , अदालतको आदेश सर्वमान्य हुने भन्दै टहरो भत्काएर मात्र टोली फर्केको थियो ।
बकरइद पर्वको पूर्वसन्ध्यामा घरबारविहीन भएका खातुन र उनको परिवार बिचल्लीमा छ । सोमबारको नयाँ पत्रिकाबाट
१९ मंसिर, काठमाण्डौं । बैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको…
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथी कारबाही भएन किन ?
१९ मसिंर, काठमाडौँ । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) ले…
सीमा अतिक्रमणबारे छलफल गर्न भारत अनिच्छुक !
सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालककै पक्षपोषण गरेको भन्दै विद्यार्थीले गरे बोर्ड परीक्षा बहिष्कार
अदालतलाई टेरेन प्राधिकरणले